by ဘရတ် Puet
ကြီးမားသောကင်မရာဓာတ်ပုံလိုပဲသင့်မိုဘိုင်းကင်မရာသင်ထွက်များနှင့်ပစ်ခတ်မှုဖြစ်သည့်အခါသင်လိုအပ်သောတစ်ခုတည်းသောအရာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်ပြုသွားကြသည်ရိုက်ကူးအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. သင်နှင့်အတူတင်ဆောင်အပေါ်စီစဉ်ထားသောအရာကိုပေါ်မှာရှိသမျှအချိန်တိုင်းအဆင်သင့်ဖြစ်သင့်သည်။ မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံနှင့်အတူသင်ရှိသည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းသင့်ရဲ့ smart ဖုန်းအမြင်အာရုံပုံရိပ် device ကိုအဖြစ်မိုဘိုင်းအဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းအရေးပါပါ!
အဆိုပါ Monoshot တစ်ခုခုပေါ်တွင်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာပေါ့ပါးရဲ့တချို့ကြောက်မက်ဘွယ် features တွေရှိပါတယ်။ ငါသည်ဤသင်တစ်ဦးစမတ်ဖုန်းကိုဓာတ်ပုံဆရာသို့မဟုတ်ဓာတ်ပုံများကိုယူ likes သူကိုပင်ဖွင့်တစ်စုံတစ်ဦးလျှင်ရရန် tripod ဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်မှာကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။
အဆိုပါ Monoshot မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တစ် monopod သော်လည်းပြန် features တွေကြောင့်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံဆရာရှိရမည်အောင်ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါဟာတစ်လောကလုံးရှိပါတယ် စမတ်ဖုန်း အားလုံးမော်ဒယ်များများအတွက် mount နှင့် 1/4 "ကိုလည်းနှင့်အတူ dabble သူကိုသငျသညျမြားအဘို့အ mount လက်မပါဝင်သည် GoPro ။
ငါသည်ဤဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ထင်သောတဦးတည်းအင်္ဂါရပ်က၎င်း၏ဘလူးတုသ် Shutter ဝေးလံခေါင်သီဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးနှင့်အတူအသုံးပွုနိုငျဒါကြောင့်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ် iOS က သို့မဟုတ်တစ်ဦးက Android ။ နောက်ထပ် "
ခြေသလုံးတာဝန်ခံ Key ကို
ခြေသလုံးတာဝန်ခံ Key ကို။ ခြေသလုံး
ဒါကြောင့်တစ်ဦးအားသွင်းမဖြစ်ပေမယ့်သင်သော့အစုတခုန်းကျင်သယ်ဆောင်ပေး, သင်အမြဲသင်တို့နှင့်အတူရှိလတံ့သောအားသွင်း cable ကိုသောကွောငျ့, ထိုခြေသလုံးတာဝန်ခံ Key ကိုကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ပါသည်။
သငျသညျအကြှနျုပျကိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ အကယ်. သင်နှင့်သင်၏ 3- သို့မဟုတ် 6-ခြေလျင်တာဝန်ခံ cable ကိုလှည့်ပတ်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်မဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ သင့်ရဲ့ဖုန်းရဲ့တာဝန်ခံနိမ့်သည်နှင့်အသင်တစ်ဦးတာဝန်ခံတစ်ဦးဖြစ်တော့ရောက်နေသည့်အခါဒါ, သင်သည်သင်၏ charger ကိုရှိပေမယ့်သင့်ရဲ့ကေဘယ်လ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး - ခြေသလုံးအဆိုပါကယ်တင်ဘို့အတွက်လာပါတယ်။
ဒါကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံအဘို့များစွာသောမှန်ဘီလူး attachment များကိုရှိပါတယ်။ အကြှနျုပျ၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးခံစားမှုယခုအချိန်တွင်မှန်ဘီလူးလေးနက်မိုဘိုင်းဓာတ်ပုံဆရာများအတွက်အဲဒီမှာအကောင်းဆုံးထွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ကျိန်းသေတာရှည်ရပ်တည်မှု, တည်ဆောက်အရည်အသွေး, နှင့်ပုံရိပ်ပေါ်အခြေခံပြီးဒီစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြောင်းကုမ္ပဏီနှစ်ခုရှိပါတယ်။ ယခုအချိန်တွင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အသုံးပြုမှုသည်၎င်း၏လွယ်ကူခြင်း၏ Olloclip ကျော်အနည်းငယ်အစွန်းရှိပါတယ်။
မှတ်ချက်: ဤသာက iOS devices တွေကိုအဘို့ဖြစ်၏။ နောက်ထပ် "
iBlazr ကြိုးမဲ့နဲ့ LED Flash ကို
အနည်းငယ်ရှိပါတယ် LED Flash ကိုယူနစ်ထွက်ရှိမိုဘိုင်းဓာတ်ပုံများအတွက်စျေးကွက်ပေါ်မှာ။ အယူအဆသင်္ဘောသား iBlazr နှင့်အတူစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်၎င်း၏ဒုတိယမျိုးဆက်ထုတ်ကုန်, အ iBlazr2နှင့်အတူထွက်ချိန်ရောက်လေပြီ။
ဒီ flash ကိုယူနစ်စျေးကွက်အပေါ်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းယုံကြည်နှင့် iBlazr2ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်2၏အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအနိမ့်အလင်းဓာတ်ပုံအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောသောကြိုးမဲ့ LED flash ယူနစ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးသည် iOS နှင့် Android အတွက်သင့်ရဲ့ဇာတိကင်မရာ apps တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ သင်ကအရောင်အပူချိန်ကိုထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာသင်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့ပုံရိပ်တွေများအတွက်အလင်းရင်းမြစ်လိုအပ်သည့်အခါတိုင်းအဘို့ကြီးသောပါပဲ။
ဤသည်တစ်လောကလုံးဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
Maktar အားဖြင့် Piconizer ပုတိုသောသူအပေါင်းတို့ကို iOS device များအတွက်တစ်ခုပညာသားပါဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ် လျှပ်စီး connector ကို ။ app တစ်ခု၏အသုံးပြုမှုနှင့်တကွ, ဓာတ်ပုံဆရာထို့နောက်အစဉ်အဆက်တစ် desktop ပေါ်မှာသို့ plug တစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးစွဲဖို့မလိုဘဲတစ်ဦးက iOS device ကိုချွတ်ပယ်အားလုံးဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုဆွဲထုတ်နိုင်ပါတယ် Wi-Fi ကို ကွန်နက်ရှင်။
အဘယ်ကြောင့်ဒီအအရေးကြီးသနည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စမတ်ဖုန်းများအပေါ် storage space အမြန်တကယ်တက်ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ Piconizer သင်သွားလာရင်းသိုလှောင်မှုအာကာသသက်သာစေနိုင်ကြောင်းကူညီပေးသည်။ သင်တစ်ဦး avid ရုပ်ပုံ taker လျှင်ဒီရှိခြင်းနေရာလေးကိုနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်သာ iOS ထုတ်ကုန်များအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ် "
DSLR ကင်မရာများ 2018 ခုနှစ် Buy သည် 8 အကောင်းဆုံးမှန်ဘီလူး
အဆိုပါ Samsung Galaxy Note 8 အတွက် 18 အကောင်းဆုံးက Hidden အင်္ဂါရပ်များ
သာ. ကောင်း၏ Portraits ရိုက်ယူခြင်းများအတွက်သိကောင်းစရာများ
အဆိုပါ 11 အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Spyware ဖယ်ရှားရေး Tools များ
2018 ခုနှစ်တွင် Buy ဖို့9အကောင်းဆုံးတီဗီအင်တင်နာ
တစ်ဦး Static IP Address ကိုဆိုတာဘာလဲ
ဘယ်လိုမီဒီယာဆာဗာအစုရှယ်ယာဓါတ်ပုံများ, Music နှင့်ရုပ်ရှင်ရုပ်ရှင်
ကျွန်တော့် iPhone ဂိမ်းကစားသူသိထားသင့်4YouTubers ကို
Galactic ယဉ်ကျေးမှု II ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အဆိုပါ Sega ကမ်ဘာဦးကသမိုင်း - 16-bit မှာခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်၏ Dawn
တစ်ခုမှာသင်ဟာများအတွက်အကောင်းဆုံး Is ဘယ်ဟာ: အမေဇုံ: Echo vs Google ပင်မ?
Malware နဲ့ဗိုင်းရပ်စ်တွေကို မှစ. ကိုယ်တော်၏အိုင်ပက်ကာကွယ်ပါလုပ်နည်း
2018 ခုနှစ်တွင် Buy မှ 8 အကောင်းဆုံးကို USB-C မှာ adapter
Safe Mode ကို (ဒါဟာတကအသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို Is နှင့်အဘယျသို့)
စိုးစံ Tinder တူသော်လည်းရာဇဝငျအဘို့
IPhone 3GS ဟာ့ဒ်ဝဲနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲထူးခြားချက်များ
Website များရန်က MP3 Files Add
Software ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - Inspiration ၏ Moment (Moi)
အိုင်ပက်များအတွက်ထိပ်တန်း Collection ကဒ်ဂိမ်းများ
Automotive ည Vision ၏ကဘာလဲ?
ITunes ကိုအတွက် Up ကို Next ကို Feature ကိုအသုံးပြုခြင်း
အသိမှတ်ပြုသည့်ကိရိယာများအပေါ် Outlook.com လွယ်ကူ Access ကိုပြန်ရုတ်သိမ်းခြင်း
ပုံများနှင့်အလုပ်လုပ် Microsoft Word ကို
Inkscape မှစ. ဂရစ်ဖစ်တင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
Apple က iPhone အတွက် Apps ကပ Create တစ် Professional ကရေးသားသူငှားရမ်း